एसियाकै अब्बल, डा. उपेन्द्र देवकोटा ।
- स्वास्थ्य खबरपत्रिका (काठमाण्डौं)
डा. उपेन्द्र देवकोटा । एसियाकै चर्चित न्युरोसर्जन, जो एक्लैले आफ्नो करिअरको ३० वर्षको अवधिमा १८ हजारजनाको शल्यक्रिया गरिसकेका छन्, १० लाख बिरामीलाई जाँचिसकेका छन्, कैयौंलाई जीवन दिए । गोरखाको अमरज्योति जनता मावि लुईंटेलबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका उपेन्द्रले विद्यालय तह होस् या कलेज वा चिकित्साशास्त्रको पढाई, सधै अब्बल विद्यार्थी सावित भएर देखाए । वीर अस्पतालमा २५ वर्ष सेवा गरेका उनी अहिले बाँसबारीस्थित न्युरो हस्पिटलमार्फत् बिरामीको सेवा गरिरहेका छन् । ७ महिना स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनले थुपै्र राम्रा कामको सुरुवात गरे । स्वास्थ्य खबरपत्रिकासंगको ३ घण्टा लामो कुराकानीमा उनले आफ्ना विद्यालय जीवनका रोचक क्षण, व्यवसायिक जीवनका सफलता र अनुभवलाई खुलेर बाँडे ।
एसएलसीसम्मका उनका सम्झना पनि रोचक छन् । गुरुवचन तोडेको भए अवस्था अर्कै हुन्थ्यो । एसएलसीमा गणितको प्रश्नपत्र उनले डेढ घण्टामा सिध्याए । उनले दोहो¥याएर उत्तर जाँचे, सबै ठिक थियो । तर ज्यामितिको एउटा प्रश्नको उत्तरको चित्रमा एक मिलिमिटर जति ढल्किएको जस्तो लाग्यो उनलाई । स्कूलमा शिक्षकले एउटा अनुशासन सिकाएका थिए उत्तरपुस्तिकाको प्रत्येक पानाको तल पिटिओ अर्थात ‘प्लिज टर्न ओभर’ नलेख्ने । उनले त्यो प्रश्न काटेर अन्तिम पन्नामा लेखे । यसपटक धर्मसंकट प¥यो । १८ नम्बरको प्रश्न थियो । बीचको काटिसकेका थिए । पिटिओ लेख्नैपर्ने अन्यथा नम्बर नआउने अवस्था भयो । उनले गुरुबचन संम्झे र पिटिओ लेखेनन् । एसएलसीमा गणितमा ८२ अंक मात्रै आयो । अहिले पनि उनी गुरुहरुप्रति उत्तिकै सम्मान गर्छन् । अहिले समाजमा अनुशासनको मूल्य कम हुँदै गएको उनको ठहर छ । र तिनीहरुलाई उनको चुनौती पनि छ, –‘अनुशासनप्रतिको निष्ठालाई कमजोरी नठानियोस् ।’
अर्को वर्ष लोकसेवा पास गरेर वीर अस्पतालमा पोष्टिङ भए । पाँच वर्ष मेडिकल अफिसरको रुपमा वीरको सर्जरी विभागमा काम गरे । विभागीय प्रमुख थिए –डा.दिनेशनाथ गंगोल । दुई वर्षमै उनी सर्जरी विभागमा रजिष्ट्रार भए । पाँच वर्षपछि उनी न्युरोसर्जरी पढ्न बेलायत गए । चिकित्साशास्त्रमै सबैभन्दा जटिल विधा न्युरोसर्जरी त उनले तालिम अवधि नसकिँदै पास गरे । त्यो कुरालाई बेलायतीले पनि सम्मान गरे । नेपालमा सिकेको विद्यार्थीको यो स्तर देखेपछि उनीहरुले अर्को वर्षदेखि नेपालमा ‘एफआरसिएस’ को परीक्षा केन्द्रं राखे ।
पढाईपछिको तालिमका करिब ६ वर्ष उनले सिटि स्क्यान आविष्कारमा नोबेल पुरस्कारप्राप्त संस्थामा समेत काम गर्ने अवसर पाए । जिन्दगीमा पाएको त्यो एक्स्पोजरले उनको सोचाई, आँट र सीपलाई अझै परिष्कृत ग¥यो । बेलायतको अध्ययनले उनलाई ठुल्ठुला सपना देख्न सिकाएको ठहर उनको छ । ‘कमजोर मानिसले भिजन लिन सक्दैनन्’ उनी भन्छन्, ‘स्वदेश फर्किएपछि नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू भएका र हुन वाँकी भिजन मैले वेलायत र मेरो स्कुलिङबाट सिकेँ ।’
१० वर्षपछि नै नेपालमा उनकै अगुवाईमा १९९९ मा सार्क क्षेत्रको न्युरो सर्जिकल कन्फ्रेन्स भयो । संसारभरबाट ३०० न्युरोसर्जन नेपाल आएका थिए । वीर अस्पतालमा सो अवधिसम्म यति प्राज्ञिक र क्लिनिकल विकास भइसकेको थियो कि सम्मेलनमा प्रस्तुत १३० वटा कार्यपत्रमध्ये १७ वटा त वीर अस्पतालको मात्रै थिए । सम्मेलनमा नेपालमा न्युरोसर्जरी क्षेत्रमा भएको विकासलाई संसारले ‘वाहवाह’ ग¥यो ।
उनको स्पष्ट दृष्टिकोण छ– प्राइमरी र सेकेन्डरी केयर विकेन्द्रित हुनुपर्छ र तर टर्सरी (सुपर स्पेसियालिटी) केयर केन्द्रिकरण । उनले न्युरो, मुटु, बाल रोग र क्यान्सरका छुट्टाछुट्टै संस्था त्यो पनि केन्द्रमै हुनुपर्छ भने । भरतपुरमा क्यान्सर अस्पताल लैजान हुन्नथ्यो भन्ने उनको स्पष्ट मत छ । यस्ता विशिष्टीकृत अस्पताल एक्लै उभ्याएर हुन्न । वरपर अरु स्पेसलिष्ट फिडर अस्पताल चाहिन्छ भन्ने उनको स्पष्ट मान्यता थियो । यो सोच पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेन ।
उनले गंगालाल भएको ठाउँमा न्युरो अस्पताल बनाउँन चाहेका थिए । नभएपनि सोही भिजनमा बनेको गंगालालको आधा जग्गा न्युरो अस्पताललाई दिनुपथ्र्यो भन्ने उनको बुझाई छ । केही मान्छेले असहयोग गरे, तर पनि उपेन्द्रले न्युरो अस्पतालको लबिङ छाडेनन् । उनलाई सबैले बाइपास गरे । गंगालाल बनेपछि पनि उनले वीरको मुटुरोग विभाग गंगालालमा गाभ्न खोजे, त्यसमा पनि ठूलो चलखेल भयो ।
उनी सधै योजनामुताविक चल्छन् । धेरै विरोधी हुँदा पनि सही काम गर्न उनी कहिल्यै डराएनन् । बाँसबासीमै न्युरो अस्पताल एवं तालिम केन्द्र स्थापनाको सपना पूरा गर्ने अठोट थियो । न्युरो अस्पताल निर्माण सकिएर सेवा सुरु गर्ने पहिलो दिन बिहान, उनले आफ्नो मातहतमा अन्य प्राइभेट अस्पतालमा भर्ना भएका १८ जना बिरामीलाई एम्बुलेन्सबाट ओसार्न लगाएर योजनाबद्ध तरिकाले उद्घाटन गरे । विशेषज्ञ सेवाका लागि छुट्टै संस्थाको सपना उनले पूरा गरे । अहिले उनलाई सो अस्पतालमा पनि अन्य विषयका सेवा सुरु गर्न धेरैका सल्लाह आउँछन् । तर उनको सपना जनरल अस्पताल हैन, उनको चाहना पैसा होइन् र त उनी त्यही संस्थाको विकासमा अहोरात्र खटिइरहेका छन् ।
बिरामी देख्नेबित्तिकै रोग पत्ता लाग्न सक्छ
गरिबको उपचारजस्तो आनन्द अरु केही छैन
जीवनमा उनले मेहनत गर्न सिके । समय कहिल्यै खेर फालेनन् । पैसाको पछाडी दौडिएनन् । सबैलाई राम्रो गर्दागर्दै पनि केही वर्षअघि जीवनकै सबैभन्दा दुःखद क्षण आयो । उनकै अगाडि छोरीको अपहरण भयो । उनी आफूलाई कहिल्यै कमजोर ठान्दैनथिए । देशका मान्छेको ‘टाउको जिम्मा लिएका’ उनलाई अपहरणको समयमा छोरीले ‘डन्ट वरी बाबा म जान्छु’ भन्दा आफूलाई निकै निरीह महसुस गरे । उनको छोरी छुटिन् तर केही मिडियाले पैसा कमाएकाले पैसा तिरेर छुटायो भनेर लेखे । त्यतिबेला उनले कमै ठाउँबाट सहयोग पाए । प्रहरीको सहयोगचाहिँ उनलाई सबैभन्दा बढी प्रभावकारी लाग्यो । र, लाग्यो राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने नेपालको सुरक्षा निकायमा निकै सक्षम मान्छे पनि छन् ।
Madhab Raj Pandey : Gorkha, Khoplang # 6,Dada Gaun
Gorkhali are Honest , Disciplined , Self motivated , Truthful and Hard-working people.